China Umbala we-Acrylic Mirror ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Sula ishidi le-acrylic
Ishidi le-acrylic lombala
Sula i-Acrylic Mirror
Ukuzuza ekubeni engasindi, umthelela, ukumelana nokubhidlika, okungabizi kakhulu futhi okuhlala isikhathi eside kunengilazi, amashidi wethu wesibuko we-acrylic angasetshenziswa njengenye indlela kunezibuko zengilazi zendabuko yezicelo eziningi nezimboni. Isibuko se-Dhua acrylic siyatholakala ngemibala egqamile.
• Kutholakala ngamashidi angama-48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830mm / 1220x2440mm)
• Kutholakala ngogqinsi luka-.039 ″ kuye .236 6 (1.0 - 6.0 mm)
• Kutholakala ngombala ogqamile, igolide, igolide le-rose, ithusi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, okuluhlaza okotshani, okusawolintshi, okubomvu, isiliva, umbala ophuzi neminye eminingi eyenziwe ngokwezifiso.
Ukwenza ngokwezifiso ukusika, ubukhulu bokukhetha kuyatholakala
• 3-mil laser-cut film enikeziwe
• Inketho yokumboza okumelana ne-AR iyatholakala
Umbala we-Acrylic Mirror AmaSpredishithi, Umbala Wenziwe Nge-Acrylic I-Plexiglass Ishidi
Ukuzuza ekubeni engasindi, umthelela, ukumelana nokuphahlazeka, okungabizi kakhulu futhi okuhlala isikhathi eside kunengilazi, yethu ishidi lesibuko le-acrylics ingasetshenziswa njengenye indlela kunezibuko zengilazi zendabuko ezinhlelweni eziningi zokusebenza nezimboni. Njengawo wonke ama-acrylics, wethuishidi lesibuko le-acrylics kungenziwa ukusika kalula, kubhola, kwakhiwa bumbela futhi laser kwagxila. Amashidi wethu wesibuko eza ngemibala ehlukahlukene, ubukhulu nobukhulu, futhi sinikeza izinketho zesibuko esisikiwe.
Igama lomkhiqizo Umbala Wokulinganisa I-Acrylic Plexiglass Sheet, Ama-Acrylic Mirror AmaSpredishithi Anemibala
Izinto Impahla ye-Virgin PMMA
I-Surface Qeda Okucwebezelayo
Umbala I-Amber, igolide, igolide eliphakeme, ithusi, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okwesibhakabhaka okumnyama, okuluhlaza okotshani, okusawolintshi, okubomvu, isiliva, umbala ophuzi neminye imibala eyenziwe ngokwezifiso
Usayizi 1220 * 2440 mm, 1220 * 1830 mm, ukusika ngokwezifiso usayizi
Ubukhulu 1-6 mm
Ubuningi 1.2 g / cm3
Ukufihla Ifilimu noma iphepha lokwakhiwa
Isicelo Ukuhlobisa, ukukhangisa, ukubonisa, ubuciko, izimonyo, ukuphepha, njll.
MOQ Amashidi angama-50
Isikhathi sesampula Izinsuku eziyi-1-3
Isikhathi sokuthumela Izinsuku 10-20 ngemuva kokuthola idiphozi
Ngenxa yokukhiqiza nokusika ukubekezelelana, ubude beshidi nobubanzi bungahluka ngo- +/- 1/4 ″. Ukubekezelelana kokuqina +/- 10% kumashidi we-acrylic futhi kungahluka kulo lonke ishidi. Imvamisa sibona ukwehluka okungaphansi kuka-5%. Sicela ubheke osayizi beshidi bokuzisholo nabangempela ngezansi.
3/16 = 4.5 mm = 0.177 ″
Sicela uxhumane nathi uma unezidingo zokubekezelela ubukhulu kunokuqina kwethu okujwayelekile.
Amashidi e-Dhua Acrylic Mirror ayatholakala ngemibala ehlukahlukene.
Okwethu isibuko se-acrylicamashidi afanele ukusetshenziswa okuhlukahlukene. Kunokusetshenziswa okuningi okujwayelekile, okuthandwa kakhulu yiPhoyinti lokuthengisa / Indawo yokuthenga, ukubonisa okuthengiswayo, izimpawu, ukuphepha, izimonyo, amaphrojekthi asolwandle, kanye nezimoto, kanye nefenisha yokuhlobisa nokwenziwa kwekhabethe, amacala wokubonisa, i-POP / okuthengisa / izitolo, ukuhlobisa nokwakhiwa kwangaphakathi nezinhlelo zokusebenza ze-DIY
Isibuko se-Plexiglass yishidi "elibonakalisayo". Kunezicelo eziningi laphoisibuko se-acrylic(Isibuko se-Plexiglass) sisebenza kahle kakhulu. AKWENZELWANGA ukufaka esikhundleni ikhwalithi yekhwalithi yesibuko sengilazi. Lokho kusho ukuthi kufanele ucabangele isibuko se-plexiglass ezinhlelweni zokusebenza lapho UKUPHEPHA kuyinkinga enkulu njengoba isibuko sepulasitiki kunzima kakhulu ukusiphula - futhi uma sikwenza, siba yizicucu ezinkulu ezingaphathwa ngezandla ezingenalutho.
Ngenkathi ukubonakaliswa kwesibuko esivela ku-1/8 ″ noma ku-1/4 looks kubukeka kukuhle kusuka ku-1-2ft kude, ngo-10-25ft noma ngaphezulu, umphumela "wendlu emnandi" wenzeka ngoba ishidi liyaguquguquka (kanti ingilazi iqinile kakhulu). Ikhwalithi yesibonakaliso incike KONKE ku-FLATNESS yodonga okhuphukela kulo (nosayizi wesibuko).
Ishidi le-Dhua Acrylic Mirror lenziwe ngeshidi le-acrylic elikhishiwe. Ukwenza isibuko kwenziwa ngenqubo ye-vacuum metallizing ne-aluminium okuyinsimbi eyinhloko evuthayo.
ishidi lesibuko le-acrylic
isibuko se-acrylic ishidi legolide
ishidi le-acrylic lesibuko segolide
acrylic self ingcina isibuko ishidi
umbala wesibuko ishidi le-acrylic
isibuko segolide ishidi le-acrylic
rose isibuko segolide acrylic
i-self adhesive acrylic mirror ishidi